တိုင်းရင်းသား နဲ့ နိုင်ငံသား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တိုင်းရင်းသား နဲ့ နိုင်ငံသား
တိုင်းရင်းသား နဲ့ နိုင်ငံသား
Posted by Mr. MarGa on Feb 4, 2014 in Creative Writing, Cultures, Editor's Choice, Politics, Issues, Think Tank | 39 comments
မောင်မာဃ ပြည်သူ့ခေတ်က ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဆွေးနွေးဝိုင်းကိုဖတ်ပြီး
နိုင်ငံသား နဲ့ တိုင်းရင်းသား ကို ပြန်သတိပြုမိသွားတယ်။
အဲ့မှာတင် သမ္မတ ဖြစ်ခွင့်ကို နိုင်ငံသားကိုပေးသင့်လား တိုင်းရင်းသားကိုပေးသင့်လား တွေးမိလိုက်တာ
နိုင်ငံသား နဲ့ တိုင်းရင်းသား ကို ဘယ်လိုစတွေးမိလဲ ဆိုတော့
နိုင်ငံသား ဆိုတာက နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာနေထိုင်သူ၊ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် တောင်းခံလာသူ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အရ နိုင်ငံသားဟု သတ်မှတ်ခံရသူ လို့ ကောက်ချက်ချတယ်။
အဲ…တိုင်းရင်းသား ကိုကျတော့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာ မူလနေထိုင်သူ၊ ပင်ရင်းနိုင်ငံအဖြစ် အမြဲနေထိုင်ခဲ့ကြသော မျိုးနွယ်စုများ လို့ ကောက်ချက်ချတယ်။ တိုင်းရင်းသား ဆိုတဲ့အထဲမှာ နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူတွေ၊ ဧည့်နိုင်ငံသားတွေ မပါဘူးပေါ့။
အဲလိုကောက်ချက်ချပြီးသကာလ နားလည်လက်ခံလိုက်တာကတော့ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကို လျှောက်ထားလာသူ မည်သူ့ကိုမဆို ပေးနိုင်တယ် ပေးလို့ရတယ်။ ဒါပေမင့် တိုင်းရင်းသားတော့ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး ဆိုတာကိုပေါ့။
ဆက်ပြောရရင် နိုင်ငံတစ်ခု တိုးတက်ဖို့ ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် နိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
နိုင်ငံအကျိုးကို ဆောင်နိုင်ဖို့ နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက် လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကို နိုင်ငံသားပေးပြီးတော့ ခေါ်ရမှာပေါ့။ ဒါဆိုရင် ဘေးနားက လူဦးရေပေါက်ကွဲထွက်နေတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေက သူတွေ၊ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပြည်တွင်းကိုဝင်လာတဲ့သူတွေ၊ နိုင်ငံအတွက် အကျိုးရှိစေဖို့ နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သူတွေ အကုန်လုံးဟာ နိုင်ငံသားဖြစ်သွားမယ်။ နိုင်ငံအကျိုးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ကြမယ်ပေါ့။
အဲ….ဒါဆိုရင် အရင်ကတည်းက ရှိနေကြတဲ့ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း ဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အကြောင်းချင်းရာ အမျိုးမျိုးကြောင့် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ၊ နိုင်ငံသားဖြစ်လာသူတွေကို ဘယ်လိုခွဲမလဲ၊ အခွင့်အရေး တန်းတူပေးမလား ဆိုတာကိုလဲ တွေးမိတယ်။
လွပ်လပ်ရေး ရကတည်းက တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အကျေအလည် မဆွေးနွေး မစေ့စပ်နိုင်လို့ အခုလို အဖွဲ့တွေကွဲပြီး ပြည်တွင်းစစ် အရှိန်မသေသေးတာတွေ၊ လက်ရှိမှာ တိုင်းရင်းသားနဲ့ နိုင်ငံသားလို့ ခွဲပြီးကြည့်လိုက်ရင် အခွင့်အရေးတွေ၊ ရပိုင်ခွင့်တွေ မတူတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားနဲ့ နိုင်ငံသား ဆိုတာကို တစ်ခုခုနဲ့တော့ ခွဲပေးသင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
အခြေခံ ရပိုင်ခွင့်တွေ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေမှာ တူသည်ဖြစ်စေ ကွဲသည်ဖြစ်စေ ပြောစရာမရှိပေမယ့် ဥပဒေပြုရေးလို၊ အုပ်ချုပ်ရေးလို အပိုင်းတွေမှာ၊ သမ္မတ ရွေးချယ်မှုလိုအပိုင်းတွေမှာတော့ နိုင်ငံသားနဲ့ တိုင်းရင်းသားကို တန်းတူထား အခွင့်အရေးပေးသင့်သလား ဆိုတာကို မေးခွန်းထုတ်ချင်နေမိတယ်။
တတ်နိုင်သူများ ဖြေပေးကြပါဦး လို့
ကိုရင်ရာမညကတော့ ဖွတဲ့ဘုတ် (အဲလေ) ဖွဘုတ်မှာ ဒီလိုပြောထားပါတယ်
နိုင်ငံသားဆိုသည်မှာ နယ်နမိတ်သတ်မှတ်စဉ်ကမပါဝင်ခဲ့သော လူမျိုးစုများနှင့်
နိုင်ငံသား သာလျှင်ဖြစ်နေပါတယ် ။
ဖြစ်စဉ်အရ တိုင်းရင်းသားဖြစ်စေ နိုင်ငံသားဖြစ်စေ
ထို့ထက်ပို၍ တတ်နိုင်ပါက နိုင်ငံအကျိုးဖြစ်ရာဖြစ်ကြောင်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးမှ လွတ်မြောက်စမြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးခြယ်လှယ်မှုများအတွင်း
တိုင်းရင်းသားဟုအမည်တွင်သော ထိုတိုင်းရင်းသားတို့မှာ သွေးခွဲခံရခြင်းအပြင် ၊
နေရာဒေသ နှင့် အချိန်ကာလအားဖြင့်
၄င်းဖြစ်စဉ်ကို မှေးမှိန်စေခြင်ငှာ တိုင်းရင်းသားနှင့်
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ တိုင်းရင်းသားတို့သည် ထူးခြား၍အခွင့်အရေးမရခဲ့ပါ ။
နိုင်ငံရေး ၊ ပညာရေး အုပ်ချုပ်ရေးတို့တွင်
ယခုအခါတွင် ဆေးဖေါ်မှားပြီး ဝမ်းတော်လားနေပါတယ်။
အစိုးရအဆက်ဆက်တွင် မြန်မာ မဟုတ်သောတိုင်းရင်းသားများအား
ဖြုတ်ချ ခဲ့ခြင်းက သမိုင်းသက်သေတည်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စမစ်ဒွန်း (ကရင်)တပ်ချုပ်
ဗိုလ်ချုပ် စောကြာဒိုး (ကရင်) ဒုချုပ်
အမေရိကားမှာ… တိုင်းရင်းသား(အင်ဒီးယန်း)ကိုအထူးအခွင့်အရေးပေးထားတယ် ပြောလို့ရပါတယ်..။
ဥပမာ.. သာမန်အမေရိကန်က… သမင်၁ကောင်သတ်ခွင့်ရှိချိန်မှာ.. အင်ဒီယန်း(တိုင်းရင်းသား)က.. ၂ကောင်သတ်လို့ရတယ်ပေါ့…။
တချို့ Tribes(ကိုယ်ပိုင်နယ်)တွေမှာဆို.. သူတို့ဥပဒေ.. သူတို့ရဲနဲ့အုပ်ချုပ်လို့လည်းရတယ်..။ သူတို့နယ်ထဲ.. ဆေးခြောက်.. ဘိန်းလဲချလို့ရသဗျ…။ ဖယ်ဒရယ်က ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး..။
သာမန်အားဖြင့်လည်း.. သာမန်အမေရိကန်တွေလျှောက်လို့မရတဲ့.. ကာစီနိုလိုင်စင်လို.. ငွေအချောင်ဝင်တဲ့လိုင်စင်ကို.. အင်ဒီယန်းတွေကိုချပေးပါတယ်..။
အမေရိကန်မှာတောင်မှ.. တခြားနိုင်ငံကလာပြီး နိုင်ငံသားလျှောက်ပြီးဖြစ်တဲ့..Naturalized Citizen အမေရိကန်နဲ့.. ယူအက်စ်မြေမှာမွေးပြီးဖြစ်တဲ့.. Natural Born Citizenအမေရိကန်… သိပ်တော့တူတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး..
(အနည်းဆုံး)မတူချက်ကတော့..Naturalized Citizen အမေရိကန်ကို.. အချိန်မရွေးသူ့မူလမွေးရာတိုင်းပြည်နှင်ထုတ်လို့ရပုံရပါတယ်..။ Naturalized Citizen ကသမ္မတတက်လုပ်လို့မရပါဘူး..။
ဒါဆို Natural Born Citizen ကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် ယူဆလို့ရမလား
ပြီးတော့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ပိုင်နက်အတွင်းမှာ မွေးဖွားရင် ဘယ်အထဲကိုဝင်မလဲဗျ။
ဥပမာ အမေရိကမှာ မွေးတဲ့ကလေးသည် နိုင်ငံသား တန်းဖြစ်တယ်လို့ ပြောထားတာတွေ့မိလို့ သူတို့ကိုကျ Natural Born Citizen ထဲကိုထည့်သလား ဒါမှမဟုတ် Naturalized Citizen အဖြစ် သတ်မှတ်သလား သိချင်လို့ပါ
ယူအက်စ်မြေက.. အင်ဒီယန်းပိုင်တာကို.. ဥရောပသားတွေဝင်သိမ်းယူထားတာမို့.. ဥရောပသားအဖြူတွေကသူတို့ကိုယ်သူတို့ တိုင်းရင်းသားအဖြစ်မသတ်မှတ်ဖူး..
သဘောက…Natural Born Citizen ကတိုင်းရင်းသားမဟုတ်ဖူးဗျ..။
အမေရိကားအခြေခံဥပဒေအရ.. အမေရိကားမြေမှာမွေးသူတိုင်း(ချွင်းချက်မရှိ)Natural Born Citizen အမေရိကန်အလိုအလျှောက် ဖြစ်ပါတယ်..။
သူက..သမ္မတအဖြစ်ရွေးခွင့်ရှိပါတယ်..။ အမေရိကားမြေကို.. တခြားနိုင်ငံခြားသားတိုးရစ်တွေ.. ဗိုက်ကြီးနဲ့အလယ်လာရင်း.. ကလေးမွေးချလိုက်ရင်လည်း.. အဲဒီကလေး Natural Born Citizen အမေရိကန်တန်းဖြစ်ပါတယ်..။ ကျန်တာကတော့.. အဲဒီကလေးအသက်အရွယ်ရရင်.. သူ့သဘောပါ..။
ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်းအရ.. လူသားတယောက်ဟာ. နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့.. .နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိရတာပါ..။
လောလောဆယ် လေ့လာကြည့်ရသလောက်တော့ မြန်မာမြေမှာမွေးသူတိုင်းကို Natural Born Citizen ပေးတာ မတွေ့မိသေး…..
ကျန်တာကိုတော့ လောလောဆယ် လည်တည်လည်တည်နဲ့ ဖတ်ဆဲမို့ ဒါလောက်ပဲ ပြောနိုင်သေးတယ်
ဒီမှာမွေးချတဲ့ကလေးတွေကကော Natural Born Citizen ထဲထည့်လို့ရလောက်လား။
အဆင်မပြေဆုံးတစ်ခုက မြန်မာနိုင်ငံမှာက လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းကြောင်းပေါ်ကလူမျိုးတွေစိမ့်ဝင်နေတာအဆိုးဆုံးပဲ။
ဒီအနေနဲ့ကတော့ နိုင်ငံသားနဲ့တိုင်းရင်းသားကိုပဲ အခွင့်အရေးခွဲခြားသင့်တယ်။
Natural Born Citizen နဲ့Naturalized Citizen ခွဲလို့မဖြစ်သင့်လောက်ဘူးနော်။
အခုသမ္မတ အိုဘားမားက.. ခိုးဝင်လာတဲ့သူ တခြားနိုင်ငံသား ၁၂သန်း(၁၂သန်း) ကျော်ကို နိုင်ငံသားပေးဖို့လုပ်နေတယ်..။ ကွန်ဂရက်(လွှတ်တော်) က.. အူလည်လည်လုပ်နေပါတယ်..။
သူတို့ကမွေးတဲ့သူကတော့ ပြောမနေပါနဲ့.. မွေးကတည်းက (သမ္မတလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့) အမေရိကန်ဖြစ်တာပါဆို…။
ယူအက်စ်မှာ အပြင်လူတယောက်… နိုင်ငံသားပေးတယ်ဆိုတာ.. မြန်မာပြည်ထက်အဆပေါင်းများစွာ တိုင်းပြည်ကပေးဆပ်ရပါတယ်..။ တိုင်းပြည်က. နိုင်ငံသားတွေနစ်နာပါတယ်..
ဘာလို့လည်းဆိုတော့..ယူအက်စ် နိုင်ငံသားဖြစ်တာနဲ့.. အစိုးရဆီက ထောက်ပံ့ကြေးငွေ.. ကျမ်းမာရေးအာမခံအကုန်အလကားရလို့ပဲ..။
အမေရိကားမှာ… အမေရိကန်ကလေး၃ယောက်လောက်မွေးထားလိုက်ရင်.. မိသားစုတခုလုံးထိုင်စားပဲ..။
လူသားဟာ.. လူသားပဲဆိုတာ သိထားရမယ်…။
လူတွေမြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်သတ်မှတ်နေကြတာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး… ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားမြင်ကြားရတော့.. ပြုံးတော်မူဖူးတယ်လို့.. ဘုရားစာတွေထဲပါတယ်..
အသက်၁၀၀ ရှည်ကြတာကျနေတာပဲ..။ တိုင်းပြည်မြေပုံတခု.. နှစ်၁၀၀ အတည်ရှိနေတာကျနေတာပဲ..။
Obama’s immigration reform agenda may lead to amnesty …
by Emily Miller – in 812 Google+ circles
Dec 25, 2013 – MILLER: Obama’s dangerous immigration reform agenda and amnesty … Overall, just 1 percent of the estimated 12 million illegal aliens were …
မနေ့က ဖတ်ရတဲ့ အပေါ် မူတည်ပြီး ပြောရရင်တော့
အဲလိုကလေးတွေကို နိုင်ငံသားအဖြစ် မပေးဘူးဗျ။
ဘယ် နိုင်ငံခြားသား မှလဲ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် မတောင်းခံနိုင်ဘူး လို့ တွေ့ထားတယ်
နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ဆိုရင် အဲ့သည် နိုင်ငံခြားသားဟာ နိုင်ငံသားတစ်ဦးနဲ့ လက်ထပ်ရမယ်
လက်ထပ်ပြီးလို့ သူ့ရဲ့ တတိယ မျိုးဆက်ကိုရောက်မှ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် တောင်းခံနိုင်သတဲ့…
လူတောင် ဖတ်ပြီး ချာချာလည်သွားတယ် တကယ်။
သများက ထမင်းနပ်မှန်အောင်ကြိုးစား စားနေရလို့
သများ ခုတလော ရန်များနေလို့
သများ ဦးနှောက် အဆင့် မမှီလို့
ဒီ အရေးတွေ မဆွေးနွေးနိုင်ဘူးလို့
ထမင်းနပ်မှန်အောင် ကြိုးစား စားနေရတယ် ဆိုတာကြောင့်
ဒါပေမင့် တစ်စွန်းတစ်စ အမြင်လေးတော့ သိပါရစေဦး
အဲဒါလေးတော့ အားတဲ့အချိန် ဝင်ပြောသွားပေးပါ
မြန်မာပြည်မယ်… တိုင်းရင်းသားဒီလောက်များပြီး.. ပြည်နယ်တွေတိုင်းရင်းသားမျိုးကြီးနာမယ်တွေစွတ်တပ်ထားတာ.. တခုခုလုပ်ရလိမ့်မယ်..
သာမန်အားဖြင့်တော့.. တိုင်းရင်းသားတွေကို.. တိုင်းရင်းသားအဆင့်ပေးပြီး..မြန်မာ့မြေမှာ.. မွေးသူတိုင်းကို… နိုင်ငံသား(ချွင်းချက်မရှိ) ပေးသင့်တယ်..။
တကယ်တော့.. အဲဒီလိုသတ်မှတ်မှုတွေဟာ.. ရီစရာတွေပါ..။
နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့.. ကမ္ဘာ့မြေကြီးရာဇ၀င်နဲ့ယှဉ်ထိုးရင်.. အင်မတန်ရီစရာနှစ်အချိန်ပေါ့..။
ပြောလို့သာပြောသာ… နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့မြေပုံ(အကျယ်နယ်နမိတ်) တွေဆိုတာကလည်း.. နှစ်၁၀၀တောင်မြဲကြတာမဟုတ်…
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစဉ်းစားကြပြီး.. အားလုံးအစဉ်ပြေအောင်… လူနေမှုအဆင့်မြင့်အောင်သာ လုပ်သင့်လှပါတယ်..။
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဆွေးနွေးဝိုင်းကိုဖတ်ပြီး
နိုင်ငံသား နဲ့ တိုင်းရင်းသား ကို ပြန်သတိပြုမိသွားတယ်
အဲ့မှာတင် သမ္မတ ဖြစ်ခွင့်ကို နိုင်ငံသားကိုပေးသင့်လား တိုင်းရင်းသားကိုပေးသင့်လား တွေးမိလိုက်တာ
တော်ပါပြီလေ ကွကိုယ်ပဲ မတောက်တခေါက် စာလေးတွေပဲ ပြန်ရေးပါတော့မယ်
ခဏနေလို့ အားနေရင် ဆရာစောဝေ တနင်္ဂနွေနေ့ကရွတ်သွားတဲ့ “မန္တလေး” ကဗျာ တင်မယ်။
You, မဟာရာဇာ အံစာတုံး and5others like this.
လူမျိုးပေါင်းတစ်ရာကျော်နေထိုင်တဲ့တိုင်းပြည်မှာ မူလအစမှာက နိုင်ငံသား တစ်မျိုးတည်း သတ်မှတ်လျှင် နိုင်ငံခြားသားနဲ့နိုငါငံသားသာလျှင်ရှိပါမယ်။
ရိုဟင်ဂျာသည် တိုင်းရင်းသားဖြစ်မဖြစ်ငြင်းစရာမလိုတော့ပါ ။
နိုင်ငံသား တစ်မျိုးတည်း သတ်မှတ်မယ် ဆိုရင်
အဲဒါဆို ထောက်ပြကြမှာတွေက အများကြီး
နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့်ကို ဘယ်သူ့ကိုမဆို ပေးနိုင်တယ်
အဲ…မူလနေထိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို နိုင်ငံသားနဲ့ တန်းတူသတ်မှတ်ရင်တော့
Unlike ·2·5hours ago
ဘွားတော်အမေစုလည်း နိုင်ငံသားဖြစ်နေသည်နှင့်အညီ သမ္မတ ဖြစ်ခွင့် ဆုံးရှုံးစရာဖန်တီး၍မရပါ
မသော် ခဏနေ တင်လိုက်မယ်
ဟိုနေ့ကတည်းက ရတာ စာရိုက်ရမှာပျင်းနေလို့
ဗမာ ဟာ တိုင်းရင်းသားထဲမှာ ထည့်ရမှာပါ။
ဒေါ်စုကိုလဲ တိုင်းရင်းသား အနေနဲ့ပဲ မှတ်ယူရမှာပေါ့
ကျနော်ပြောခဲ့သလို နိုင်ငံသားနဲ့ နိုင်ငံခြားသားကိုပဲ ခွဲမယ်ဆိုရင်ရှိနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် မမျှတပါဘူး
ရတယ် ရိုဟင်ဂျာ(အဲလိုပဲခေါ်တာပေါ့လေ) ကို နိုင်ငံသား ပေးနိုင်တယ်။
ဒါပေမင့် အဲဒါဆိုရင် နိုင်ငံသားနဲ့ တိုင်းရင်းသားကိုခွဲလိုက်၊ ပြီးရင် အခွင့်အရေးပါ ခွဲပေးရင် လက်ခံနိုင်စရာရှိတယ်
နိုင်ငံသားနဲ့ တိုင်းရင်းကို ဘယ်လိုအခွင့်အရေးတွေများခွဲစေချင်ပါသလဲခင်ဗျာ ။
တိုင်းရင်းသားတက်သောကျောင်းကိုနိုင်ငံသားမတက်ရ ၊ တိုင်းရင်းသား စားသောဆန်ကိုနိုင်ငံသားမစားရ ၊ တိုင်းရင်းသားနက်သောနိုက်ကလပ်ကိုနိုင်ငံသားမတက်ရ …………
နေလာကြရင်း အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားပေါ်ပေါက်ရာ ကစပြီး
၄င်းနိုင်ငံရဲ့ အက်ျုးကိုဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
လူမျိုးဆိုသည်မှာအသားအရောင် ဓလေ့ ဘာသာစကားများကွာခြားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံသားနှင့် တိုင်းရင်းဟူ၍ခွဲခြားဆက်ဆံကြပါက လူမျိုးရေး အသားအရောင် ခွဲခြားမှုသာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုသို့လူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုများခေတ်မမှီတော့ခြင်းကို လက်ခံကြမယ်ထင်ပါတယ် ။
နိုင်ငံတစ်ခု တိုးတက်ဖို့ ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် နိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
နိုင်ငံအကျိုးကို ဆောင်နိုင်ဖို့ နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက် လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကို နိုင်ငံသားပေးပြီးတော့ ခေါ်ရမှာပေါ့။ အဲဒီအထိလဲ လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမင့် တိုင်းရင်းသားတွေကို နိုင်ငံအကျိုး ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း နည်းပါးလှသော ဆိုတာ ဘယ်လိုအတွေးနဲ့များ ပြောလိုက်ပါလိမ့်ဗျာ။
လွပ်လပ်ရေး ရကတည်းက တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အကျေအလည် မဆွေးနွေး မစေ့စပ်နိုင်လို့ အခုလို အဖွဲ့တွေကွဲပြီး ပြည်တွင်းစစ် အရှိန်မသေသေးတာလေ။ တိုင်းရင်းသားတွေ နိုင်ငံအကျိုး ဆောင်ရွက်နိုင်တယ် မဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးဆိုတာ တထစ်ချ ပြောလို့မှမရတာ။ တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသားလို့ ခွဲခြားဆက်ဆံတာနဲ့ လူမျိုးရေးတွေ အသားအရောင်ခွဲခြားမှုတွေလုပ်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင် အရမ်းကြီး ကြီးမနေဘူးလားဗျာ။ အခုအချိန်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံး ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နေချိန်မှာ သူတို့ကို နိုင်ငံသားလို့ မပြောဘဲ တိုင်းရင်းသားလို့ ပြောတာက ပိုပြီး သင့်တော်မယ်. ပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားတွေ လက်ခံနိုင်လောက်မယ့် ရပိုင်ခွင့်တွေ၊ အခွင့်အရေးတွေကိုလဲ ခွဲပေးရမှာပေါ့။ လက်ရှိမှာ တိုင်းရင်းသားနဲ့ နိုင်ငံသားဆိုပြီး ကြည့်လိုက်ရင် ဘယ်သူတွေက ပိုပြီး ရပိုင်ခွင့်တွေ နည်းနေသလဲ သိမှာပါ။
နိုင်ငံသားဆိုသည်မှာ နယ်နမိတ်သတ်မှတ်စဉ်ကမပါဝင်ခဲ့သော လူမျိုးစုများနှင့်
နေရာဒေသ နှင့် အချိန်ကာလအားဖြင့်
၄င်းဖြစ်စဉ်ကို မှေးမှိန်စေခြင်ငှာ တိုင်းရင်းသားနှင့်
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ တိုင်းရင်းသားတို့သည် ထူးခြား၍အခွင့်အရေးမရခဲ့ပါ ။
ခဏနေဦးဗျို့ ကျနော် ပတ် မွှေနေတယ်။
ဗိုလ်ချုပ် စောကြာဒိုးကို ဖြုတ်တာတော့ ကျနော် မဖတ်ဖူးသေးလို့ မသိဘူးဗျ။
အဲ…ဗိုလ်ချုပ် စမစ်ဒွန်းက သူ့ဆန္ဒအတိုင်း အငြိမ်းစားယူသွားတာလို့ သိထားတာပါ။
နောက်တစ်ပိုင်း တိုင်းရင်းသားနဲ့ နိုင်ငံသားခွဲပြပေမင့် ဘယ်အခွင့်အရေးမှ ထူးခြားစွာပေးစရာမရှိ ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောရရင်
ကျနော်မြင်တာ မှားရင်လဲ မှားနိုင်ပါတယ်။
သို့ပေမင့် တိုင်းရင်းသားနဲ့ နိုင်ငံသား(ပြုခွင့်ရသူ) တွေကိုယှဉ်မိရင်တော့
တိုင်းရင်းသားတွေကိုပဲ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ရွေးချယ်ချင်ပါတယ်။
ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ဘယ်လိုပဲရှိနေပါစေ နောက်ခံအခြေအနေ၊ ရေမြေသဘာဝတွေ မတူပါဘူး။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံသား နဲ့ တိုင်းရင်းသား ဆိုတာကို ကျနော် ခွဲမြင် ခွဲပြောနေတာပါ။
Unlike ·2· 1 hour ago
စကားမစပ် ရွာထဲကိုတစ်ချက်လာခဲ့ပါအစ်ကိုရေ။ ပိုစုံအောင်လို့ပါ
Like · 1 · More · 52 minutes ago
ရေးတဲ့ စာနဲ့ ကွန်မန့်နဲ့ အဆင်ချောအောင်လို့ တစ်ခုပဲ ကူးလိုက်တာပါ။ ကျန်တာတွေကို အစ်ကိုပြန်ကူးတင်ပေးရင်အဆင်ပြေမလားပဲ
Unlike ·2· 50 minutes ago
နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရထားနဲ့တရုပ် ကုလားတွေကိုသမ္မတဖြစ်ခွင်မပြုတာကို လက်ခံသော်လည်း
တိုငါးရင်းသားစစ်စစ်သာ ဖြစ်ရမယ်ဆိုပါက နောင်အလွန်ရှုပ်ထွေးနေပါလိမ့်မယ် ။
ုဦးမာဃရဲ့ သဘောအရ ကျွန်တော်တို့ဟာ နောင်လာမယ့်ကာလမှာ သမ္မတအလောင်းအလျာအတွက် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်တို့ ရွက်ဆစ်တို့ ဖဒိုမန်းငြိမ်းမောင်တို့ကိုမှေိာ်လင့်နေရတော့မှာပေါ့ နော်
Like · 1 · More · 43 minutes ago
ကျနော်ပြောတဲ့ တိုင်းရင်းသားထဲမှာ ဗမာကိုပါ ထည့်ပြောထားတယ်လေဗျာ။
နိုင်ငံသားနဲ့ တိုင်းရင်းသား ဆိုတာကို ကျနော်က နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူနဲ့ နဂိုမူလ နိုင်ငံသားအဖြစ်ခွဲတာပါ။
အစ်ကို အပေါ်မှာပြောသလို နိုင်ငံသားနဲ့ နိုင်ငံခြားသားပဲ ခွဲမယ်ဆိုရင်
နိုင်ငံသားအားလုံး (ပြုခွင့်ရသူရော၊ ဖြစ်သူရော) က မကွဲပဲ ရှိနေမှာပေါ့
ပြုခွင့်ရသူ – ဥပမာဘင်ဂါလီပေါ့
နိုင်ငံတကာမှာလဲ မဲပေးခွင့်တောင် မရှိလိုက်ရှိလိုက်ပါဗျာ။
တိုင်းရင်းသားလို့ဆိုလိုက်ရင် ၁၃၀ ကျော်သော လူမျိုးမိားက်ုပြေးမြင်ရပါလိမ့်မယ် ။
Like · 1 · More · 30 minutes ago
အင်း..တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆုံမှတ်တစ်ခုနား နီးလာပြီလား လို့
စက်ကင်းစီတဇင် အနေနဲ့ နိုင်ငံသားပေးတာကို ကျနော်လက်ခံပါတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံသားပဲ ဖြစ်နေပါစေပေါ့။
ဒါပေမင့် စက်ကင်းစီတဇင်တွေကို သမ္မတဖြစ်ခွင့် မပေးနိုင်ပါဘူး။
ထို့အတူ သူတို့တွေကို တိုင်းရင်းသားတွေလို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေလဲ မပေးနိုင်ပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရတဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမဆို၊ ဘယ်လူမျိုးစုကိုမဆို ပြောတာပါ။
ယခုလို လူမျိုးအသားအရောင်နဲ့ အခွင့်အရေးတွေခွဲခြားကြမယ်ဆိုပါက
တိုင်းရင်းသားများသည် တိုငါးရငါးသားမဟုတ်သူနှင် လကါမထပ်ရလို့အမိန်ထုတ်ရပါတော့မယ်ခငါဗျာ ။
ဘာအတွက်လဲဆိုရငါ လက်ရှီလူဝင်မှုကြီးကြပါရေးဥပဒေမှာ မည်သည့်တိုင်းရင်းသားစစ်စစ်ဖြစ်စေ အခြား နိုင်ငံသားအဆင့် တင်းတင်းရင်းရင်းရှိသော မြန်မာ-မွန် -မြန်မာ-ရခိုငါ-ရှမ်း-မြန်မာ -တရုပ် ကဲ့သို့ တိုင်းရင်းသားသွေး၉၅%ပါရှိပြီး တရုပ်သွေး 5%သာပါသောသူနှင့်လက်ထပ်ပြီးရသောကလေးမှာ အော်တိုမစ်တစ် သွေးနှော်နိုင်ငံသားအဆင့်က်ုပြုတ်ကျသွားပြီးဖြစ်နေလို့ပါခင်ဗျာ ။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေတချို့နဲ့ လွဲနေတာတွေရှိပါတယ် ။
Like · More · 20 minutes ago
စက်ကင်းင်္စတဇင်နဲ့ စီတဇင်ဆို ပြီးပြီလေဗျာ ။
ဒါကြောင့် နိုင်ငံသား ပြုနိုင်ငံသားနဲ့ နိုင်ငံခြားသားဆိုပြီးရောမဟုတ်ပါလားဗျာ
Like · More · 15 minutes ago
ဘိန်းရောင်းခွင့် ၊ ပြည့်တန်ဆာခန်းထောင်ခွင့် လောင်းကစားခန်းထောင်ခွင့် ပေးလိုက်ရင် ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်ပါသလဲခင်ဗျာ
Like · More · 13 minutes ago
တစ်ချက် ပြန်ပြီး အနှစ်ချုပ်ကြရအောင်
ကျနော်က တိုင်းရင်းသား၊ ပြုနိုင်ငံသား ဆိုပြီး ခွဲတယ်။ နှစ်ခုလုံးကို နိုင်ငံသားအဖြစ်ပြောတယ်၊ ကျန်တာကို နိုင်ငံခြားသားအဖြစ်ပြောတယ်
အစ်ကိုက နိုင်ငံသား၊ ပြုနိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံခြားသားဆိုပြီးပြောတယ်။
စကားလုံးနဲ့သာကွဲပြီး အဓိပ္ပာယ် တူတယ်လို့ပဲ ကျနော်ယူပါတယ်။
အဲ…..တိုင်းရင်းသားတွေကို အထူးအခွင့်အရေးပေးတာကို ဆက်ပြောရမယ်ထင်တယ်။ အဲဒါက ဖက်ဒရယ်အထိရောက်မယ်။
တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေကို၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်ကြေညာပြီး (အစ်ကိုပြောသလိုပေါ့) ဘိန်းရောင်းခွင့်တို့ ပြည့်တန်ဆာခန်းထောင်ခွင့်တို့ လောင်းကစားခန်းထောင်ခွင့် တို့ကို သူတို့သဘောအရ (သူတို့သဘောအရ) ပေးပါမယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေ၊ ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းနဲ့ အခွင့်အာဏာ ပေးပါမယ်။ အဲဒါကျနော့်သဘောပါ။
ပင်လုံစာချုပ်ကို ပြန်ရှာပြီး ခဏနေ ပြန်လာပါမယ်
ဒီလ်ုဆိုရင် မန်းဒလေးတိုင်း ရန်ကုန်တိုင်းပဲခုးတိုင်းနဲ့ နေပြည်တော်ပေါငါးပြီး
Like · More ·5minutes ago
တိုင်းရင်းသားနဲ့နိုင်ငံသားက အဓိတ်ပါယ်လုံးဝမတူပါဘူးခင်ဗျာ ။
.. တိုင်းရင်းသားအရေအတွက်များသလောက် ပြဿနာတွေကလည်းများတယ်.. ဘေးက တရုတ်၊ ဘင်္ဂလား နိုင်ငံတွေကလည်း လူဦးရေများဆိုတော့ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံသားဥပဒေတွေ ရပိုင်ခွင့်တွေ က အရေးကြီးလာရော.. စင်ကာပူလို တိုင်းရင်းသားအမျိုးမျိုးမရှိတဲ့နိုင်ငံကတော့ နိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့တင် ပြတ်တယ်.. ယူအက်စ်လို ပဒေသာစုံ လူမူအဖွဲ့ကြီးအားကောင်းပြီးသားကျတော့လည်း သိပ်ခွဲခွဲခြားခြားလုပ်နေဖို့မလိုဘူး.. ကိုယ်ဆီကျတော့ ကိုယ့်အရပ်နဲ့ ကိုယ့်ဇာတ် အဆင်သင့်မယ့် ဥပဒေတွေ၊ ပိုင်းခြားမူလေးတွေတော့ လိုမယ်ထင်တယ်.. ဘယ်လိုဘယ်ပုံခွဲခြားဖို့လိုတယ်ဆိုတာ ထိတော့ မပြောတတ်ဘူး..
အရှေ့မှာ ဥပမာယူစရာ နိုင်ငံတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဥပမာပဲ ယူလို့ရမှာဗျ တိုက်ရိုက်ကူးချဖို့ကျ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး
ကိုယ့်အရပ်နဲ့ ကိုယ့်ဇာတ် အဆင်သင့်အောင်တော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ ထုတ်ရမှာ ဆိုတော့
အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေ၊ ကောင်းကွက် ဆိုးကွက်တွေကို ချိန်ထိုးပြီး ဆုံးဖြတ်ရမပေါ့။
ကျန်တဲ့သူတွေကို လက်လှမ်းမီသလောက် ဆွဲခေါ်ပေးပါဦး တီသဲရေ
ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့…တော့ပစ်ကို.. လ၀က၀န်ကြီးဖတ်တဲ့နေရာမတင်ပဲ.. ဖွဘုတ်သွားဆွေးနွေးနေလို့.. ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလည်းနော..
Read more: Facts About American Indians Today | Infoplease.com http://www.infoplease.com/us/census/american-indian-federal.html#ixzz2sLHqEtNT
The weight of legal and historical authority indicates that the term “natural born” citizen would meanaperson who is entitled to U.S. citizenship “by birth” or “at birth”, either by being born “in” the United States and under its jurisdiction, even those born to foreign parents; by being born abroad to U.S. citizen-parents; or by being born in other situations meeting legal requirements for U.S. citizenship “at birth”. Such term, however, would not includeaperson who was notaU.S. citizen by birth or at birth, and who was thus born an “alien” required to go through the legal process of “naturalization” to becomeaU.S. citizen.
နိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်တဲ့သူတွေကြားထဲ ခွဲခြားမှု ဆိုတာရှိသရွေ့
ပဋိပက္ခ ဆိုတာ ရှောင်မရ။
နိုင်ငံ ရှေ့ဆက်မဲ့ လမ်းချောမွေ့မှု မရှိ
တိုးတက်မှု ဆိုတာမျိုးက ရှေ့မရောက်ရင်၊
ဟိုခွဲခြား ဒီခွဲခြား ဟိုဟာလက်မခံ ဒီဟာမပြောင်းချင်ဖြစ်
အဲဒါနဲ့ ဂျာအေး သူ့မေရိုက်။
ဖယ်ဒရယ်စနစ်သဘောပေါက်ရင်.. ရခိုင်ကိစ္စ.. ဗမာတွေဝင်ပြောခွင့်မရှိဖူးဆိုတာ..။ ကချင်မြစ်ဆုံကိစ္စ.. ဗမာတွေအတင်းဝင်လို့မရဖူးဆိုတာ… သိကြလ်ိမ့်မယ်..။
ယူအက်စ်မှာ.. ကိုလိုရာဒိုမြစ်ကို.. နီဗားဒါးပြည်နယ်ကပိတ်ပစ်လည်း.. မြစ်အကြေက.. ကယ်လီဖိုးနီးယားဘာတတ်နိုင်တာလိုက်လို့…။ ဖယ်ဒရယ်မှာ ပြည်နယ်ချင်းတရားစွဲယုံသာရှိသဗျ…။
အနောက်ကမ်းအရေးဟာ… ခိုးဝင်လာသူတွေနေခွင့်ပေးမပေး.. ရခိုင်တွေအဓိကစဉ်းစားရမယ်ဖြစ်သလို.. မြစ်ဆုံမှာဆည်ဆောက်ခွင့်..အကျိုးရယူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကလည်း.. ကချင်တွေအဓိကဆိုင်တယ်ဖြစ်ပါကြောင်းရယ်… လို့..။
.. ဖယ်ဒရယ် စနစ် အနေနဲ့ ပြည်နယ်တွေကို ကိုယ့်စီးပွားရေးကို စီမံခံခွဲခွင့်ပေးသင့်ပေမယ့် လက်ရှိအချိန်လို အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် မပီပြင်သေးတဲ့ အချိန်မှာတော့ အဆင်မပြေလောက်သေးဘူးထင်တယ်ဗျ.. တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဆိုတာလည်း လက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်တွေရော၊ လက်ရှိ လွတ်တော်၊အစိုးရတွင်းပါနေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေရော နဲ့ ရောရောထွေးထွေးရှိနေဦးမယ် .. ဘယ်ခေါင်းဆောင်က ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားရေးအတွက် စဉ်းစားမယ်၊ ဘယ်ခေါင်းဆောင်က သူ့အိပ်ထဲ ချည့်ထဲ့ဖို့ ကြံမယ်ဆိုတာ တိုင်းရင်းသားတွေ စောင့်ကြည့်ဆုံးဖြတ်ဖို့ အချိန်လိုဦးမလားပဲ.. ဒါ့အပြင် တတိုင်းပြည်လုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ စီးပွားရေးစီမံကိန်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊ လဝက၊နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ဆုံးဖြတ်ချက် တွေဆိုလည်း သတ်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ် လက်ထဲ ဝကွက်အပ်ဖို့ (အခုအချိန်မှာ) မဖြစ်သေးဘူးထင်တယ်ဗျ.. နောက်ပိုင်းကျမှ ဖယ်ဒရယ်ကို ယူအက်စ်ပုံစံယူယူ၊ ဆွစ်ဇလန်ပုံစံယူယူ ရနိုင်တာပဲဗျ..
ယလဲ့ … စူပရာနိုတွေ ပြန်တွေ့လာရပါလား ….ဟိ…
တိုင်းရင်းသားနဲ့ နိုင်ငံသား ဘာကွာသတုန်းဆို..
အဲ့လို စာလုံးဗောင်း ကွာတဲ့အတွက်..
အသံထွက်လည်း ကွာ သွားပါတယ်…
အသံထွက်ကွာတဲ့အတွက် အနက် လည်း ကွာတယ် ခည ..
အနက် ကွာတာက ဘယ်လို ကွာ တာလဲဆိုတော့ … ကျနော် လည်း မသိတော့ပါဝူး ခီညော်….
အဲဒါကိုမသိရင် စူပရာနိုကို ရှင်းသွား
တိုင်းရင်းသားဆိုတာ မူလနိုင်ငံနယ်နမိတ်သတ်မှတ်ကတည်းက ပါလာတဲ့ လူမျိုးနွယ်တွေမို့ မွေးရာပါရပိုင်ခွင့်လို့ ပြောရမယ်။
နိုင်ငံသားဆိုတာကတော့ ဒီမြေဒီရေမှာ အခြေချနေထိုင်လို့ ခွင့်ပြုပေးတဲ့ ခွင့်ပြုချက်ပေ့ါ။
ဒါပေမယ့် နောင်လာနောင်သားတွေ မှတ်ပုံတင်လုပ်ဖို့ မိဘဘိုးဘွားစဉ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ နိုင်ငံသားကျထားတဲ့ လက်မှတ်ပြလိုက်ရင် နောက်တစ်ဆက်ကို ဆက်မသွားတော့ဘူး။ ပိုတောင်လွယ်ကူမြန်ဆန်နေသေးတော့တယ်။
နိုင်ငံသား ဖြစ်ပြီးတဲ့ နောက်မှာ
တိုင်းရင်းသား ဖြစ်မဖြစ် ကို အဓိက ခွဲတာက
လူမျိုး/ဘာသာ ဆိုတဲ့နေရာနဲ့ပဲ ခွဲမယ်ထင်တယ်
ကချင်၊ ဗမာ (ဒါမှမဟုတ်) ကရင်၊ရှမ်း လိုမျိုးတွေကျ
ဘယ်လိုခွဲ ဘယ်လိုယူမယ် ဆိုတာတော့ မသိ
-တိုင်းရင်းသားက တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကို ရ ရ မယ်-
-အများအကျိုးစီးပွား တိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားကိုမဆန့်ကျင်စေပဲ- မိမိလူမျိုးရဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်း စာပေ -ယဉ်ကျေးမှု့ တွေကို ဖေါ်ဆောင် မြှင့်တင်ခွင့်၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းနဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်တွေအတွက် ပွဲလမ်းကျင်းပခွင့် ၊ -အထိမ်းအမှတ် နေရာဌာနနေ့ရရက် သတ်မှတ်ခွင့် ၊ စတာတွေပေါ့…။
-အဲဒါမျိုးကလွဲရင် တိုင်းရင်းသားနဲ့ နိုင်ငံသားတွေအားလုံး အခြားအခွင့်အရေးတွေမှာ တန်းတူညီမျှဖြစ်သင့်တယ်။
-လောလောဆယ် နိုင်ငံရေးအရ မရင့်ကျက်သေးတဲ့ မျိုးဆက်တစ်ဆက်စာ ရွေးကောက်ပွဲ ခြောက်ကြိမ်စာလောက်မှာတော့ -တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ၊ အစိုးရဌာနတွေရဲ့ အကြီးဆုံးအကြီးအကဲတွေ(ညွှန်ချုပ်အဆင့်)၊ လွှတ်တော်အမတ်တွေ နေရာမှာ -တိုင်းရင်းသားတွေသာဖြစ်ရင် ပိုပြီးပြဿနာကင်းပါတယ်။
-နိုင်ငံသားမဖြစ်သေးတဲ့ ဒုတိယတန်းစား နိုင်ငံသားတွေကို
-ဒါကြောင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်၊ ဌာနအကြီးအကဲ၊ (တိုင်းပြည်လုံခြုံရေး စီးပွားရေးဆိုင်ရာ)အရေးကြီးဌာနတွေရဲ့ဝန်ထမ်း၊ လွှတ်တော်အမတ် –
-အဲဒီလေးမျိုးမှအပ အခြားသော လူ့အခွင့်အရေး ပြည်သူ့အခွင့်အရေး တွေမှာ
-တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံသား နဲ့ ဒုတိယတန်းစားနိုင်ငံသား (ဧည့်+ပြု) အားလုံး လုံးဝတန်းတူညီတူရှိထိုက်ပါတယ်။၊
-တိုင်းပြည်အတွင်းနေထိုင်ခွင့်၊တိုင်းပြည်အတွင်းသွားလာခွင့်၊ ဥပဒေနဲ့အညီ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခွင့်၊ ပညာသင်ကြားခွင့်၊ -အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်၊ ဆေးကုသခံယူခွင့်၊ အားလုံးမှာ တန်းတူညီတူဖြစ်ရမယ်။
-လက်ရှိမှာ တန်းတူညီတူ လုံးဝ လုံးဝ လုံးဝ မဖြစ်ပါဘူး….
-အလွန်ဆိုးရွားစွာ ဥပဒေမဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံနေတာ နှစ်ပေါင်းကြာပြီး ခေါက်ရိုးကျိုးနေပါပြီ…။
-လက်ရှိ ၁၉၈၂ ဥပဒေကို ပြောင်းစရာမလိုပါဘူး
-တကယ်ပြောင်းရမှာက အစိုးရနဲ့ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ ခံယူချက်နဲ့ လုပ်ကိုင်ပုံ ပြောင်းရမှာ-
-ဧည့်နိုင်ငံသားက ဧည့်နိုင်ငံသားအဖြစ် မျိုးဆက်တစ်ဆက်မကလို့ နှစ်ဆက်သုံးဆက်ပဲနေရနေရ ဘာမှမနစ်နာဘူး။
-၀န်ကြီး/အမတ် လုပ်ခွင့်မရှိတဲ့ ရိုးရိုးပြည်သူအဖြစ် လူ့အခွင့်အရေးတွေ မဆုံးရှုံးပဲ အေးအေးဆေးဆေး နေသွားရုံပဲ….
-အခုလူတွေက ဦးနေ၀င်းကိုမုန်းတယ်လဲပြောသေး – ဦးနေ၀င်းရဲ့ ခြေရာအတိုင်းလဲ တထပ်တည်းနင်းချင်သေး………
(ဒီကွန်မင့်ကို ရေးချင်လို့ မနက်သုံးနာရီထိုးကြီး ထပြီးရေးရတယ်။ ပြောရတာ အားမရဘူး။ အဆင်ပြေတဲ့နေ့ ပိုစ့်တင်ဦးမယ်)
အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ၊ အပေါ်မှာ သူကြီး ပြောခဲ့သလိုပါဘဲ ၊
ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိတဲ့ ( လူစိတ် ရှိတဲ့ ) နိုင်ငံ အများစုလက်ခံထားတဲ့ ပုံစံ ကတော့ ၊
၁ ။ Native တိုင်းရင်းသား ။ သြဇီမှာဆို အဘိုရီးဂျင်း တွေ ပေါ့ ။
၂ ။ Natural Born Citizen ဒီမြေမှာ မွေးတဲ့သူဟာ အလိုအလျှောက် ဒီ နိုင်ငံသား ပါ ။
၃ ။ တခြား နိုင်ငံသား က နိုင်ငံသား လာလျှောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ Naturalized Citizen ။
( ၃ ) မျိုး ကွဲနေသပေါ့လေ ။
အဲဒီ ( ၃ ) မျိုး ဟာ အခွင့်အရေး နဲနဲစီ ကွာပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် နဲနဲစီဘဲ ( နဲနဲစီဘဲ ) ကွာတာပါ ။
Naturalized Citizen နှင့် Natural Born Citizen ကြားမှာ ဆိုရင် ၊
Naturalized Citizen ဟာ သမ္မတ / အကြီးဆုံး ရာထူး လုပ်ခွင့် မရှိပါ ။
ပြောရရင် အဲဒီ တစ်ချက်က လွဲပြီး ကျန်တာ ဘာမှ မကွာသလောက်ပါဘဲ ။
Natural Born Citizen နှင့် Native တိုင်းရင်းသား ကြားမှာ ဆိုရင် ၊
Native တိုင်းရင်းသားတွေကို ကျောင်းလခ နှင့် ဆေးကုသခွင့် လွတ်ငြိမ်းခွင့် ပေးပါတယ် ။
ပြောရရင် တိုင်းရင်းသားတွေကို ငွေကြေး အထောက်အပံ့ နဲနဲ ပိုပေးရုံလေးဘဲ ကွာပါတယ် ။
အဲဒီတော့ကာ ၊ အဲဒီ ( ၃ ) မျိုး ကြားမှာ နဲနဲစီဘဲ ( နဲနဲစီဘဲ ) ကွာတာကို တွေ့ရမှာပါ ။
အဲဒီ ကွာတဲ့ အချက်တွေကလည်း ၊
အခြေခံ လူ့ အခွင့်အရေးတွေကို မထိခိုက်လောက်တဲ့ ဟာလေးတွေပါ ။
မြန်မာပြည် ကိစ္စ ကို အဘ အမြင် ပြောရရင်တော့ ၊
အမှန်ကန်ဆုံးကို ၊ မလိမ်တမ်း မညာတမ်း ၊ ဒဲ့ ပြောရရင်တော့ ၊
ဘင်္ဂါလီ ပြဿနာဟာ ၊ စ ကတည်းက ၊ ဘာသာရေး အရေးအခင်း ဖြစ်နေတာပါ ။
တကယ်လို့သာ ဘင်္ဂါလီတွေသာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်နေရင် ဒီ ပြဿနာ မပေါ်ပါဘူး ။
မာရမာကြီးတွေ အခုအချိန်မှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘက်ကနေ ပြေးဝင်လာနေသေးတာဘဲ ။
မာရမာကြီးတွေ က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်နေတော့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုနေကြတာဘဲ ။
အဘ က မြန်မာပြည် ကနေ သြဇီ ရောက်လာတာ သိပ်မကြာသေးတော့ ၊
အရိုင်း အစိုင်း / လူ မဆန်တဲ့ အတွေးအခေါ် နဲနဲ ကျန်နေပါသေးတယ် ။ ခွင့်လွှတ်ကြပါကွယ် ။
အဲဒီတော့ကာ ၊ အဘ သာဆိုရင် ၊
မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ မွေးတဲ့သူတိုင်းကို မြန်မာနိုင်ငံသား တန်း မပေးချင်ပါဘူး ။
မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ မွေးတဲ့သူကို ၊ အမြဲတန်း နေထိုင်ခွင့် Permanent Residency (PR) ဘဲ ပေးပါမယ် ။
အေး ၊ အဲလို အမြဲတန်း နေထိုင်ခွင့် Permanent Residency ( PR ) အဆင့် အနဲဆုံးရှိတဲ့ ၊
မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂါလီ မိဘ နှစ်ပါး ကနေမှ ၊
မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ထပ်ပြီး မွေးဖွားလာတဲ့ ဘင်္ဂါလီ သား / သမီး ကိုမှ ၊
Natural Born Citizen အဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ပေးချင်ပါတယ် ။
လိုရင်းကတော့ Natural Born Citizen အစစ် မဟုတ်ဘဲ Generation တစ်ဆင့် ခံစေချင်တာပါ ။
အဘ ရဲ့ အဲဒီ အရိုင်း အစိုင်း / လူ မဆန်တဲ့ အတွေးအခေါ်အတွက် ခွင့်လွှတ်ကြပါ ။
ဒါပေမယ့် ၊ ဘင်္ဂါလီတွေ အတွက် အရမ်းကြီး မတရားရာတော့ မကျနိုင်ပါဘူး ။
အခု အဘ အကြံပေးသလောက်လေးကို လုပ်လိုက်မယ် ဆိုရင်ကို ၊
လက်ရှိ ဘင်္ဂါလီတွေ ရဲ့ ၉၀ % လောက် မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့်ရမှာပါ ။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ခိုးဝင် ဘင်္ဂါလီတွေ ဆိုတာ မရှိသလောက်ပါဘဲ ။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံထဲက ဘင်္ဂါလီတွေဟာ ဘိုးဘေး ကတည်းက နေခဲ့သူတွေဘဲ များပါတယ် ။
ဒါကို လူဝင်မှု ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ ကိုယ်တိုင် တရားဝင် ထုတ်ဖေါ် ဝန်ခံပြီးသားပါ ။
အပေါ်မှာ အဘ ရဲ့ အရိုင်း အစိုင်း / လူ မဆန်တဲ့ အတွေးအခေါ်ကို ပြောပြီးတဲ့နောက် ၊
အခုတစ်ခါတော့ ၊ အဘ ရဲ့ ယဉ်ကျေး / လူဆန်တဲ့ အတွေးအခေါ်ကို ပြောပါရစေ ။
အဲဒီလို မြန်မာနိုင်ငံထဲက ဘင်္ဂါလီတွေကို အမြဲတန်း နေထိုင်ခွင့် နှင့် နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့် ၊
အဆင့်ဆင့် ရှင်းရှင်း လင်းလင်း သတ်မှတ်ပြီးတဲ့အခါ ၊
အမြဲတန်း နေထိုင်ခွင့်ရ နှင့် နိုင်ငံသား ဖြစ်ပြီးတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကို ၊
မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ နေရာအနှံ့ လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့် နှင့် ၊
လွတ်လပ်စွာ ပညာသင်ခွင့် ၊ စီးပွားရှာခွင့် ပေးရပါမယ် ။
အဲ ၊ မြန်မာနိုင်ငံထဲကို နယ်ခြားက ဖြတ်ဝင်မယ့် ခိုးဝင်လိုသူတွေ အတွက်ကတော့ ၊
နယ်ခြားကို ဖြတ်ဝင်တဲ့ အချိန်မှာ တစ်ခါတည်း ပစ်သာသတ်လိုက်ပါ ။
ဘယ် နိုင်ငံတကာ ကမှ ကန့်ကွက်လို့ မရဘူး ။
ကန့်ကွက်လဲ ဂရုစိုက်စရာ မလိုဘူး ။
လတ်တလော မြင်ရသလောက်တော့ နိုင်ငံသားနဲ့နိုင်ငံခြားသား တန်းတူအခွင့်အရေးရနေတာဘာဘဲ
တိုင်းရင်းသားဘက်မှာသာ အခွင့်အရေး ရတာနည်းနေသေးတာ
လမ်းကြုံတုန်း ပါ့စ်ပို့ လုပ်တဲ့ အတွေ့အကြုံလေးပြောပြအုံးမယ်
ပီးခဲ့တဲ့ ၃လလောက်က မှတ်ပုံတင်ရလာတယ် (ပဆံတပြားမှမပေးဘဲ တိုင်းရုံးက သယ်ရင်းတယောက်ကို အတင်းဆွဲခေါ်သွားပီးဘေးမှာထိုင်ခိုင်းထားလိုက်တာနဲ့ မြန်မြန်ရလာတာ)
အိုက်ဒါနဲ့ ပါ့စ်ပို့ သွားလုပ်တော့ နေ့ချင်းပီးရမလိုဖြစ်လို့ ၀မ်းသာနေတုန်း နောက်ဆုံးအဆင့်ကျမှ ရုံးဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့အမှုနဲ့ထောက်ခံစာပြန်တောင်းခိုင်းလို့ တိုးလို့တန်းလန်းဖစ်ပါလေရော
တနေကုန်လူတိုးထားရတဲ့အရှိန်ကမသေသေးတော့ ကောင်တာရှေ့မှာ ပေကပ်ကပ်ရပ်နေပီး ဘာပုလို့အိုက်ထောက်ခံစာလိုရသလဲ အတင်းမေးနေတာနဲ့ ဦးစီးအရာရှိရဲ့ မျက်စောင်းထိုးခြင်း ငေါက်ငမ်းရှင်းပြခြင်းကိုခံလိုက်ရသေးတယ်
မကျေနပ်သေးတာနဲ့ ကောင်တာနားကမခွာသေးဘဲ နောက်လူတေကို ဘယ်လိုလုပ်ပေးလဲရှိုးနေတုန်း ဘင်္ဂလီတသိုက်ဝင်လာပီး အကိုကြီး အကိုကြီးနဲ့ ပြုံးပြလိုက်တာ….ဟိုကလဲ ညီမငေးတို့ ဟောဒမာ လက်ဗွေနှိပ်ဆိုပီး စလစ်ထုတ်ပေးလိုက်တာမြန်မှမြန်….ပြောစရာတခုဘဲရှိတယ်…သူရို့ ဖမ်မလီဟစ်စထွီ ဖြည့်ရတဲ့ ဖောင်မှာ ဘာစာတလုံးမှမပါဝူး…သများတေဖြင့် ဖြည့်လိုက်ရတာ ဒီတဖောင်ထဲမှာတင် ပုံစံတူ ၃ခါရီးများတောင်ရေးရတာ….ဖွီ…ရွံထှာ….အိုက် အူးဆီးအရာရှိကို
ဘာများ ကွာတုန်း ဆိုဒေါ့ဂါ ..
ချေးပါဂျင်လာလို့ နောက်မှ လာပြောမယ်ကွာ ..
လောလောဆယ် အိမ်ဒါ ပြေးလိုက်အုံးမယ် .. ဖွတ် ..
တစ် ။ ။စစ်ထဲဝင်။
နှစ် ။ ။ ဗိုလ်ချုပ် (ဖြစ်နိုင်ရင် မှုးကြီးအထိ)ဖြစ်အောင်လုပ်။
သုံး ။ ။ အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင် (က) ဗမာတိုင်းရင်းသားဖြစ်အောင်လုပ်။
(ခ ) ဘာကိုးကွယ်ကွယ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ပြောင်းကိုးကွယ်။
အဆင့် (၁)နဲ့ (၂) မှာတင် နှစ်က ဆယ်.ချီသွားဖို့ သေချာတာမို့
အဲ့ဒီအချိန်မှာ အစိုးရ အနည်းဆုံး နှစ်ဆက်ပြောင်းဖို့ သေချာတာမို့
ဒုသမ္မတ ဖြစ်ဖို့ သေချာပါဦးမလား ကိုရင်………
နွားနို့အသာသောက်နေချမ်းပါ … ဖျောင်းတိုင်လေးထွန်းပြီး…အဟိဟိ ..ပါးတီးခံချင်နေတယ်ပေ့ါလေ…ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အိမ်ပေါင်ကားရောင်းလုပ်နေတာကွ….ဘေးကတရုတ်ကိုကြောက်နေရတဲ့အထဲ …
လိုင်းစုံသွားအောင် တရားနည်းနည်းဝင်ဟောဦးမှ ကိန်ကိန်
. တဏှာ မာန ဒိဌိ တဲ့
. ငါ့လူမျိုး ငါ့ဘာသာ ငါ့ယဉ်ကျေးမှု့ငါ့စာပေတဲ့
. ကိုယ်ဘယ်စောက်မျိုးက ဆင်းသက်ပေါက်ဖွားလာတယ် ဆိုတာ
. သူများ ( အနောက်တိုင်းသားတွေ ) ရှာဖွေသိလို့ ပြောမှ သိတာကို ဖင်ကကျယ်နေကြသေးတယ်
( မြန်မာပျီထဲနေတဲ့လူတွေ ဘယ်ကလာလို့ လာတယ်ဆိုတာ
. အနောက်တိုင်းသားတွေရဲ့ ရှာဖွေမှု့ စာတမ်းတွေဖတ်ပြီးမှသိတာ )
. စာပေဘဲကြည့်တော့ ဘယ်သူ့စာပေကမြင့်တယ် နိမ့်တယ် လုပ်နေ ကိုယ်ဖါသာတီထွင်ထားတဲ့
. အမှတ်အသားဘါရှိသဒုံး သူများတီထွင်ခဲ့တာကို ဖေါ်လိုလိုက်သုံးခဲ့တာကို သိသိကြီးနဲ့
. ယားနေကြတာ အံ့ရော
. လူမျိုးဆိုတဲ့ ( တဏှာ ) မှာ
. တို့လူမျိုး တို့စကားစာပေယဉ်ကျေးမှု့ ( မာန ) ဘဲ လွှမ်းမိုးရမယ်
( ဗမာ ဖြစ်မှတော့ ဗမာစကားဘဲပြောရမှာပေါ့ ဗမာ့ယဉ်ကျေးမှု့
. ကချင် ဖြစ်မှတော့
. ကယား ဖြစ်မှတော့
. ကရင် ဖြစ်မှတော့
. ချင် ဖြစ်မှတော့
. မွန် ဖြစ်မှတော့
. ရခိုင် ဖြစ်မှတော့
. ရှမ်း ဖြစ်မှတော့
. ဒဗြုံ ကြီးကျန်သေးတယ် အဲ့ဒါတွေဖြစ်မှတော့ အဲ့သည်စကား ယဉ်ကျေးမှု့ဆိုပြီး )
. ဖြစ်နေကြတာကို မှ ဟုတ်တယ်ထင်နေတဲ့ ( ဒိဌိ ) ကြီးလွှမ်းနေကြရင်
. အင်္ဂလိပ်တွေက ပုဆိုးတွေထမီတွေဝတ်တာကို ဒို့ယဉ်ကျေးမှု့က ဘာညာ ဂုဏ်ယူကြ
. ကိုယ်က သူများအဝတ်အစားဝတ်တော့ ဘါဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်
. ကိုယ့်လူမျိုး ဆိုတဲ့ ( တဏှာမှာ )
. ကိုယ့်လူမျိုးစာပေစကားယဉ်ကျေးမှု့ဘဲ ဆိုတဲ့ ( မာန ) မှာနေပြီး
. လူမျိုး ယဉ်ကျေးမှု့ဆိုတာကို အမှန်လို့လက်ကိုင်ထားတဲ့ ( ဒိဌိ ) ကြီးရှိနေသ၍တော့
. ဆက်ပြီး ယဉ်ကျေးမှု့စာပေကြ
. ဆက်ပြီးဟုတ်တယ်လို့ ခံစာကြ